नवनियुक्त प्रमुख डा.कृष्ण प्रसाद पौडेल अस्पतालमा स्वागत – Halkaro
चितवन । भरतपुर अस्पतालका नवनियुक्त प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालमा विरामीलाई लाईन बस्न नपर्ने गरी सेवादिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकताभएको बताएका छन।
अस्पतालको सेवा बढाउनु भन्दापनिभएका सेवालाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै उनले सबैको साथबाट आफुले कामगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । अस्पतालमा गरिएको स्वागतकार्यक्रममा डा. पौडेलले विरामीले लाइृन बस्ने अवस्थाको अन्त्यकालागीआफ्ले पहिलो कामगर्ने बताए।
नेपाल सरकारबाट प्रमुख मेसुमानियुक्त भएपछि उनलाई अस्पतालका चिकित्सक , स्वास्थ्यकर्मी तथाकर्मचारीले स्वागत गरेकाहुन । अब सेवा बढाउने होईन भएका सेवालाई प्रभावकारीताबनाउने हो उनले भने हरेक स्थानमालाईन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
विरामीले लाईन बस्न नपर्ने भएमात्रै आफु सफलभएको अनुभव गर्छु ’ । उनले सबैको साथबाट कामगर्ने बताएका छन । स्वागतकार्यक्रममा अस्पतालका निवर्तमान मेसु डा. रविन खड्काले बधाई दिदै अस्पतालको छोटो बसाईमा धेरै सिक्नपाएको बताए।
पूर्व मेसु डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले अस्पतालको विकास र सेवाको गुणस्तरीयतामाख्यालगर्न सुझावदिए । बधाईदिन अस्पतालका चिकित्सकतथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उनले अंकमाल गरेर धन्यवाद दिए ।
← देवघाट क्षेत्र बिकास समितिका:अध्यक्ष टंकनाथ पौडेलको बिदाई
‘जम्बोरी नाइट’का लागि छानिए मोडल →